Parhelio: waa maxay, sifooyinka iyo asalka | Saadaasha Shabakadda
Mid ka mid ah dhacdooyinka ugu xiisaha badan ee jawiga waa inuu noqdaa parhelion. Waa dhacdo cimilo ku jirta oo qorraxdu keento, in kasta oo sidoo kale loo qaadan karo ifafaale asal ahaan ka soo jeeda xiddigiska. Waxay badanaa ka muuqataa duruufo gaar ah oo deegaan gaar ah iyo muddo gaaban.
Qodobkaan waxaan kuugu sheegeynaa waxa parhelion-ka yahay, sida loo sameeyo iyo saameynta uu leeyahay.
1 Waa maxay parhelion
2 Goorma ayaa kiniisaddu soo muuqataa?
3 Taariikhda Soomaaliya
4 Saamaynta iyo saamaynta
Waa maxay parhelion
Waa nooc ka mid ah dhacdooyinka Hawada ee ay sababaan qorraxda. Waa laba iftiin oo yaryar oo ka sameysma labada dhinac ee qorraxda markii nooc daruur ahi jirto. Noocyada daruuraha ee lagama maarmaanka u ah parhelion inay dhacaan waa kuwa nooca cirrus. Daruurahaani waxay leeyihiin muuqaal feyl u eg oo qaarkoodna waxay u eg yihiin jajab suuf ah. Wixii noocan ah ifafaale hawleedku inay dhacaan, daruuraha noocan ah waa inay jiraan maaddaama ay ku jiraan kristantarro baraf ah oo u shaqeeya sidii xabbado yaryar. Kaniisadan barafka yar ayaa mas'uul ka ah dib u habeynta falaadhaha qorraxda. Tan macnaheedu waa inay u weecin doonaan qayb ka mid ah falaaraha qorraxda meel kale oo sameysmaya parhelion.
Xaaladahaas deegaan waxay aad ugu yar yihiin meelaha qaar ee meeraha. Waxaad dhihi kartaa ifafaalahaani wuxuu la mid yahay inaad aragto qorrax daruuraha ka dambeysa laakiin ka iftiin yar qorraxda dhabta ah. Had iyo jeer maahan in dhacdadani dhacdo labada parhelios waa la arkaa. Badanaa waqtiyada waxaa jira kaliya daruuro cirrus ah oo dhinac ah qorraxda oo kaliya qaabab parhelion ah. Waxay yihiin kaliya dhibco dhalaalaya oo ah halo cirfiid ah oo ku wareegsan qorraxda. Waa dhif iyo naadir in halo la arki karo gebi ahaanba.
Sidii la filayay, waa dhacdo jawiga ku jirta oo aan had iyo jeer isku eegayn. Mararka qaarkood parhelion wuxuu u muuqdaa inuu yahay bar fudud oo qaab wareegsan. Qaababkan noocan ah qorraxdu waxay u muuqataa mid aan dhalaalayn. Dhinaca kale, waqtiyada kale waxaan ka heli karnaa dhinac dheeri ah oo toosan ama waxay ku jajabisaa midabada qaansoroobaad. Kaliya mararka qaarkood waxaad arki kartaa jajabyo ka yar qaanso roobaadka. Waa inaan ku jahawareeraa jajabyada qaansoroobaad maxaa yeelay parhelion marwalba waxay u muuqataa qorraxda, halka qaanso roobaadka ayaa u muuqda dhinaca cirka oo ka soo horjeeda qorraxda.
Goorma ayaa kiniisaddu soo muuqataa?
Ilaa xilligan aan waxba laga ogayn dhacdadan jawiga, waxba lagama xisaabtamo. Si kastaba ha noqotee, markaan ogaanno jiritaanka parhelion, waa marka aan bilowno inaan ka feejignaano dhacdadan. Waa la arki karaa in ka badan inta uu sii joogo. Badanaa waxaa la arkaa makhribka ama subaxa marka qorraxdu kahooseyso ciida.
Parhelion sida caadiga ah waxay u muuqataa si sax ah xagal ah 22 darajo qorraxda, xagasha ay falaadhaha ileysku dib u qaboojinayaan awgeed. Waxaad ka heli kartaa inaad tan hesho. Cirka meesha soo socota lagu sameeyo: waxa ugu horreeya ayaa ah in gacanta si buuxda loo dheereeyo oo la furo gacanta. Markay qorraxdu ku daboosho gacanta waxaan arki karnaa in kaniisaddu ay ahaato ugu yaraan meesha caarada farta yar ay tilmaamayso. Waxaa la dhihi karaa waxaan cirka ku cabireynaa calaacasha gacanta. Haddii ay jiraan daruuro cirrus ah oo qaybtaas ah, waxaa suurtagal ah in parhelion ay sameysmaan. Waxaa laga heli karaa midigta iyo bidixda qorraxda ama labadaba.
Ereyga parhelio wuxuu ka yimid Greek-para-Helios. Tan waxaa loo fasiri karaa inay lamid tahay qorraxda. In kasta oo ay aad u yar tahay soo noqnoqoshada, mararka qaarkoodna marmarka dayaxa ayaa sidoo kale la heli karaa. Saameyntu waa isku mid sida loo qabanayana waa isku mid. Dhibaatada tan ayaa ah in la arki karo oo kaliya marka uu jiro dayax buuxa iyo daruuraha cirrruurku waa inay jiraan si ay u awoodaan inay diidaan iftiinka yar ee dayaxa.
In kasta oo aysan aad u dheereyn, haddana ifafaalahaani wuxuu umuuqdaa mid la diiwaan galiyay ilaa waqtiyadii hore. Tusaale ahaan tan waxaa lagu magacaabaa buugga koowaad ee La República. Halkan waxaan ka heli karnaa jilayaal kala duwan oo ku mashquulsan wadahadal falsafad ah. Wadahadalkan waxaad ku arki kartaa sida mid ka mid ah jilayaasha la weydiiyay wax ku saabsan jawi hawo laga arkay magaalada Rome. Dhacdadan waxaa lagu magacaabaa Parhelio waxaana loola jeedaa dhacdo "laba qorraxood" lagu arki karo isha qaawan.
Maanta waxaan ognahay inaysan tani run ahayn tan iyo Iyagu waa quraaradaha barafka ah ee mas'uul ka ah diidmada iftiinka qoraxda.
Dad badan ma yaqaaniin sababta ay u badan tahay ifafaalahaan xilliga qaboobaha. Maaha wax lala yaabo in bartamaha xilliga qaboobaha aan diiwaangelin karno heerkulka -20 darajo meelo badan oo adduunka ah sida waqooyiga Mareykanka. Meelahan waxaa ka jira deegaan qabow leh xaalado deegaan oo aad u daran oo ku habboon in lagu dhiirrigeliyo jiilka ifafaalaha noocan ah. Sameynta parhelion waxay u baahan tahay sameynta kareemo baraf ah daruuraha cirrus.
Si kastaba ha noqotee, haloskani wax shaqo ah kuma lahan qaanso roobaadka, sidaan horay u soo sheegnay. Had iyo jeer waxay soo muuqdaan xiga qorraxda, halka qaanso roobaadka u muuqdo dhinaca ka soo horjeedka.
Saamaynta iyo saamaynta
Muxuu ifafaalaha indhahaani cirka ka muujinayaa. Waa waxa aan inbadan isweydiineyno. Xaqiiqada ah in parhelion uu ka muuqdo bartamaha cirka waxay saadaalinaysaa isbadalada saadaasha hawada qaarkood ee dhici kara marka cimiladu soo dhowaato. Waana haddii aan aragno parhelion ay macquul tahay taasi ku soo food leh duufaanno keeni doona roob muddo-gaaban ah. Qaar badan oo ka mid ah beeraleyda ku nool aagagga adduunka ee ifafaalaha noocan ah marar badan lagu arki karo waa kuwa u tixgeliya kaniisadda inay calaamad u tahay imaatinka cimilada xun. Daruuraha Cirrus meelo badan ayaa la sameeyaa oo keliya maalmaha ka hor muuqaalka duufaanka.
Waqtiyada kale, markay halo leedahay qaab aad u badan oval, waa la saadaalin karaa in cimiladu ka sii dari doonto muddo 12-24 saacadood ah.
Waxaan rajaynayaa in macluumaadkan aad wax badan uga baran karto waxyaalaha loo yaqaan parhelion ee astaamaheeda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Parhelion